१७ दिनपछि प्रहरीमा नयाँ आईजीपी को ? अर्याल बिदा बसेनन् – Medianp
१७ दिनपछि प्रहरीमा नयाँ आईजीपी को ? अर्याल बिदा बसेनन्
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १२, २०७४१३:३५0
काठमाडौं, १२ चैत । चैत २९ गते देखि नयाँ आईजीपीले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धी डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल र पुष्कर कार्कीलाई चर्चामा ल्याइएको छ । त्यसअघि नै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल बिदामा बस्ने भनिए पनि उनी स्वयं दौडधूपमा लागेका छन् । विगतको परम्पराअनुसार फागुन २९ गतेदेखि नै अर्याल बिदामा बस्नुपर्ने थियो । तर, अहिले पनि उनी नियमित काममा लागेका छन् ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार २९ चैत २०४४ बाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका सबै अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुनेछन् । १७ दिनपछि नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षकसहित १५ एआईजीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने छन् । अवकाशकै मुखमा एआईजीद्वय माधव नेपाल र रणबहादुर चन्द बिदामा बसेका छन् । अन्य एआईजीहरू खटाइएकै स्थानमा कार्यरत छन् ।
एआईजीहरू जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी, रणबहादुर चन्द, कमलसिंह बम, माधव नेपाल, हेमन्त पाल, पशुपति उपाध्याय, देवेन्द्र सुवेदी, केशरीराज घिमिरे, माधव जोशी, विजयलाल कायस्थ, मधु पुडासैनी, पंकज श्रेष्ठ, मिङ्मार लामा, विजयराज भट्ट २९ चैतपछि प्रहरी सेवामा रहने छैनन् ।
त्यसैगरी, डीआईजीहरू भोगबहादुर थापा, गणेश केसी, केदारमानसिंह भण्डारी, रमेश भट्टराई, पुष्पचन्द्र रञ्जित, सुदीप आचार्य, पुष्कलराज रेग्मी, सुवोध घिमिरेले अवकाश पाउँदैछन् । यसअघि २९ चैत २०४४ सालमा सेवा प्रवेश गरेका कृष्णप्रसाद गौतम, बलराम शर्मा पौडेल, विष्णुहरि गौतमले केही दिनअघि एसएसपीबाट अवकाश पाइसकेका छन् । एक वर्षअघि सोही समूहका यादवराज खनाल र लव विष्टले अवकाश पाइसकेका थिए ।
२९ चैतमा नेपाल प्रहरीका २६औं आईजीपीको रूपमा २९ माघ २०४६ मा सेवा प्रवेश गरेको समूहले कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाउँदै छ । डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल र पुष्कर कार्की आईजीपीको प्रमुख प्रतिस्पर्धामा छन् भने त्यो भन्दा अघि ३० असार २०४५ र १ फागुन २०४५ मा सेवा प्रवेश गरेका क्रमशः उत्तम कार्की र रमेश खरेलले पनि २६आैँ आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेको आफैंले बताउने गरेका छन् ।
तर, सरकारले कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भावी आईजीपीको विषयमा विभिन्न चरणमा कुराकानी भइसकेको स्रोतले बताएको छ ।
पछिल्लोपटक एसएसपीबाट बढुवा हुँदा सर्वेन्द्र खानल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्की र उत्तम कार्कीलाई एकैसाथ बढुवा गरिएको थियो भने सिनियारिटीमा खनाल देखिएका छन् ।
यसपटक डीआईजीको रिक्त दरबन्दीमा बढुवा हँुदा एकैपटक तीनवटा ब्याचबाट बढुवा हुन सक्छन् । २९ चैतपछि बढुवाको निर्णय हुने हो भने १२ जना एसएसपीले डीआईजी हुने अवसर पाउनेछन् । त्यस्तै, १७ जना एसपीहरू एसएसपी हुनेछन्, ३० डीएसपीहरू एसपीमा बढुवा हुनेछन् । अघिल्लो पटक डीआईजी हुनबाट छुटेका दिनेश अमात्य, केदार रिजाल, पिताम्बर अधिकारी डीआइजीमा बढुवा हुनेछन् ।
एमाले चार मुख्यमन्त्री को कस्ता ? एक पदाधिकारीको मूल्यांकन यस्तो छ